Ukutyelela iWarner Theater eWashington, DC
Eunited States EWashington, DC
by URachel Cooper
I-Warner Theater, ekhoyo entliziyweni yedolophu yaseWashington, DC ., Yindawo yaseshashalazini eyi-1,847 ebonisa imisebenzi ehlukahlukeneyo yokubandakanya ama-comedies, idrama, kunye neemculo. Ukuba ukhenketha inkulu-ntloko yesizwe, le ntlalontle eqhubekayo yintlanzi ezintathu kuphela kwiNdlu eNtshonalanga kwaye inika unonophelo unyaka wonke.
Xa uceba uhambo lwakho oluya eWashington, DC, qinisekisa ukubhuka amathikithi kwimiboniso kwi-Warner Theater yezona zihlalo ezingcono kwaye ezingabizi-ezinye zibonisa ukuba zithengisa, ngoko ke qiniseka ukuba ujonge phambili kwiwebsite yenkampani.
Ekuqaleni kwakhiwa ngo-1924, le midlalo yembali yahlaziywa kwiminyaka yee-1990 kwaye ihlala igcina i-charm yexesha elide lisekhompileni yaseMerika, kunye neefotestries ezicebile, ezihlaselayo kunye neendawo zokuhlala zentlalontle ezandula zihlaziywa.
Idilesi: 513 13th Street NW, Washington, DC
I-Metro esondele kakhulu: i- Metro Centre
Ukufumana iiTikiti kwi-Warner Theater Production
Ingaba unesimo sengqungquthela okanye ukusebenza kwinqanaba lokuphila, i-Warner Theater yiyona nto yokugcina izolonwabo kwi-Hill, kwaye abaninzi bezopolitiko abakhulu belizwe lethu bahlala bebonakaliswa ngepalente.
Amathikithi atholakala kwi-intanethi kwaye kwi-ofisi yebhokisi (leyo ingafumaneka kwakhona kwifowuni), ngoko ke ukuba uceba uhambo lwakho ukuya eWashington, DC kwaye ufuna ukufumana ubugcisa nenkcubeko njengoko ungakaze uyibone ngaphambili, kwiwebhusayithi yenkampani kwaye uphewule ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo kulo nyaka, amakhonsathi kunye nemidlalo.
Intlawulo yee-5 zeenkonzo zongezwa kuzo zonke iitikiti ezithengiweyo kwiWarner Theater Box Office, kodwa iTiketmaster.com, olawula ininzi yekethikiti yokudlala, nayo inomrhumo wokusebenza wokuthenga intanethi.
Indawo yesiganeko iyafumaneka nakwiziganeko ezikhethekileyo, iikonkethi, ukufumana iziganeko, imicimbi yabucala, kunye neentlanganiso zenkampani ngenjongo enkulu-qhagamshelana newebsite yenkampani yomcimbi okhethekileyo kunye nexabiso lokuthengwa kweenkampani.
Ukufikelela kwiWaterer Theater kunye nokuPaka kwiDowntown DC
I-Warner Theater ihlala entliziyweni yaseWashington, DC, iibhloko ezintathu kuphela ezivela kwi -White House , kunye neendawo zokutyela ezininzi, iihotele kunye neevenkile zihlala kummandla ojikeleze le midlalo.
Nangona kunjalo, ukuba awuqhelekanga kummandla we-metro , unokufuna ukucwangcisa apho uza kubeka khona phambi komboniso. Iinqwelo zokupaka ezilandelayo zifumaneka kwindawo efutshane yokuhamba kunye nokubonelela ngexabiso lokunciphisa ukupaka ixesha lokubonisa kwakho:
I-PMI-1220 E Street Street
I-PMI-1325 G Street NW
I-PICK PARK I-1301 Pennsylvania Avenue NW
I-PICK PARK II-1331 Pennsylvania Avenue NW
UKUPHILA KOLONI-1201 Pennsylvania Avenue NW
ICARRARK-1450 F Street NW
Biza iofisi yebhokisi kwi-Warner Theatre ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa malunga neelaphu zokupaka ezinikezwa ngokuthenga ithikithi lokubonisa.
Iindawo zokutyela ezilungileyo kakhulu kufuphi ne-Arena Stage eWashington, DC
I-Smithsonian Holiday Festival 2017 eWashington DC
I-Montgomery Mall: Ukuthenga, Ukutya ne-ArcLight Cinemas
I-Triathlon yesizwe 2017 eWashington DC
I-Holiday Getaways ephezulu kufuphi ne-Washington, DC
10 iNzululwazi kunye neTeknoloji e-Washington DC
I-Mayweather kunye nePacquiao Iikiti ezithengiswayo, kodwa ikhona isizathu sokuba ufanele ulinde
Izilwanyana ezimnyama ziyingqayizivele phakathi kweNewport Mansions
Iingcamango zoMtshato weSeptemba
Yonke Into Yomtya onokuyifumana e-Southern India
I-Los Cabos 'Iindawo ezininzi zeRomanmoon Hotels
I-Canal Saint-Martin Ubomi baseParis
Ixesha leMardi Gras elizayo
I-Lexington, eKentucky-i-Mileage ne-Estimated Driving Times
Uhlala phi eRoma
Ngenye imini eCuyahoga Valley National Park, eOhio
Izidlo zaseRussia eziqathayo kufuneka uzame
Ukunyuka eSwitzerland kwiSiqithi saseHilton Head
Hong Kong Weather ngeNyanga